Boeing dia manonona ny filoha lefitra vaovao an'ny hetsiky ny governemanta
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Boeing dia manonona ny filoha lefitra vaovao an'ny hetsiky ny governemanta
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ziad S. Ojakli dia voatendry ho filoha lefitra mpanatanteraky ny asan'ny governemanta Boeing
Manatevin-daharana an'i Boeing i Ojakli taorian'ny asa aman-draharaha nahomby sy maro karazana teo amin'ny sehatry ny fifandraisan'ny governemanta lehibe manerantany amin'ny indostrian'ny fiara sy ny famatsiam-bola ankoatry ny fanompoana ao amin'ny fitantanana White House an'ny filoha amerikana teo aloha George W. Bush.
Ziad S. Ojakli dia voatendry ho filoha lefitra mpanatanteraka vaovaon'ny governemanta Boeing nanomboka ny 1 Oktobra 2021.
Ojakli dia hitarika ny ezaka politika ataon'ny Boeing, ho lohan'ny lobiista ary hanara-maso ny Boeing Global Engagement.
Ojakli dia hanao tatitra amin'ny filoham-pirenena Boeing sy CEO David Calhoun ary hiasa ao amin'ny Birao mpanatanteraka ao Boeing.
Ny orinasa Boeing dia nanendry an'i Ziad S. Ojakli ho filoha lefitra mpanatanteraky ny asan'ny governemanta nanomboka ny 1 Oktobra 2021.
Amin'ity andraikitra ity dia hitarika ny ezaka politika ataon'ny Boeing i Ojakli, ho lobiôbyista ho an'ny orinasa manerantany, ary hanara-maso ny Boeing Global Engagement, fikambanana mpanao asa soa manerantany an'ny orinasa. Izy dia hanao tatitra amin'ny filoha Boeing sy CEO David Calhoun ary hiasa ao amin'ny Executive Council an'ny orinasa. Amin'ity andraikitra ity dia nandimby an'i Marc Allen i Ojakli, BoeingChief Chief Officer, izay efa filoha lefitra mpanatanteraka vonjimaika ny hetsiky ny governemanta hatramin'ny volana jona lasa teo.
"Ziad dia mpanatanteraka voaporofo ary manana rakitsoratra mahavariana momba ny fitarihana ny politikam-bahoaka sy ny asa fifandraisan'ny governemanta amin'ireo orinasa manerantany," hoy i Calhoun. "Ny traikefany lehibe amin'ny andraikitry ny mpanatanteraka ao amin'ny governemanta sy ny sehatra tsy miankina dia handray anjara amin'ny fifandraisantsika amin'ireo mpiray antoka aminay rehefa manohy mifantoka amin'ny fiarovana, ny kalitao ary ny mangarahara izahay ary manova ny orinasanay ho avy. Te hisaotra an'i Marc Allen ihany koa aho tamin'ny fitarihany ny fikambanana Government Operations nataontsika tato anatin'ny volana vitsivitsy satria nanohy nandroso ny laharam-pahamehana momba ny politikan'ny orinasanay ity. ”
Manatevin-daharana i Ojakli Boeing manaraka ny asa mahomby sy maro samihafa amin'ny anjara asan'ny governemanta zokiolona eo amin'ny sehatry ny fiara sy ny indostrian'ny famatsiam-bola ankoatry ny fanompoana ao anatin'ny trano Fotsy fitantanan'ny filoha amerikana teo aloha George W. Bush.
Vao tsy ela akory izay, Ojakli dia niasa ho mpiara-mitantana sy filoha lefitra zon'ny Softbank tamin'ny taona 2018-20, izay namoronany sy nitarihany ny raharahan'ny governemanta manerantany ho an'ny orinasa mpamatsy vola hanohanana ny raharaha mpanao lalàna, lalàna ary politika rehetra ho an'ny orinasa. Talohan'ny nidirany tao amin'ny Softbank, Ojakli dia nandany 14 taona tao amin'ny Ford Motor Company ho filoha lefitra vondrona, izay nitarihany ekipa iray manerantany izay nanamafy ny tanjon'ny orinasa lehibe ary nitantana ny fifampiraharahana amin'ireo governemanta amin'ny tsena 110 erak'izao tontolo izao. Amin'izany andraikitra izany dia nitantana ny sandrin'i philanthropic an'i Ford natokana ho fanohanana ny antony manerantany izy.
Teo aloha, i Ojakli dia nanompo tao amin'ny trano Fotsy amin'ny maha lefitra voalohan'ny raharaha fanaovan-dalàna an'ny filoha George W. Bush ny taona 2001-04. Talohan'izay, Ojakli dia Lehiben'ny Staff sy talen'ny politika ho an'ny senatera amerikana Paul Coverdell ary nanomboka ny asany tao amin'ny biraon'ny senatera amerikana Dan Coats izy.
Ojakli dia miasa amin'ny maha talen'ny birao an'ny Smithsonian's National Zoological Park any Washington, DC ary mpikambana ao amin'ny birao ao amin'ny The Jackie Robinson Foundation izy.
Ojakli dia manana mari-pahaizana bakalorea amin'ny governemanta amerikana avy amin'ny oniversite Georgetown.